जेठि छोरी मात्र लिएर बस्ने बुबा र आमाको पर्यो लफडा – Kavrepati
Home / समाचार / जेठि छोरी मात्र लिएर बस्ने बुबा र आमाको पर्यो लफडा
admin September 18, 2021	समाचार Leaveacomment 139 Views
तपाईंको दाम्पत्य जीवन सुखमय छ । खुसीसाथ दुबैले दाम्पत्य जीवन भोग गरिरहनुभएको छ । एकआर्काको भावना बुझ्नुभएको छ । आपसी साथ र सहयोगबाट घर-व्यवहार चलाउनु भएको छ । सबै कुरा ठिकठाक छ ।
विश्वास, प्रेम, सद्भाव, सहयोग । हो, दाम्पत्य सुखका आधार हुन् यी । तर, यसमध्ये कुनै एक तत्वमा मात्र ग’डब’डी भएमा तपाईंको दाम्पत्य उस्तै रहँदैन, जस्तो हिजोको दिनमा थियो । तपाईंको खुसी लु’टिन्छ । तपाईको सुख हरण हुन्छ । तपाईंको सम्बन्ध दुई चिरा पर्छ । हिजोसम्म हाँसीखुसी बिताइरहेको दाम्पत्य जीवनमा आज अचानक कालो बादल म’डारिन थाल्छ । किन यस्तो हुन्छ ? के घर-परिवारले गर्दा ? सत्रुले गर्दा ? छिमेकले गर्दा ? होइन, तपाईं भित्रकै कुरुप तत्वले गर्दा । त्यो तत्व हो, अविश्वास ।
श्रीमान श्रीमतीबीचको सम्बन्ध विश्वासमा टिकेको हुन्छ । जबसम्म विश्वास हुन्छ, तबसम्म माया हुन्छ, एकअर्का बीच प्रेम हुन्छ, सहकार्य हुन्छ । जब विश्वास टु’ट्छ, माया, प्रेम, सहकार्य सबै टु’ट्छ । बाँकी रहन्छ त केवल शं’का । र, शंकाले व्यक्तिलाई त जलाउँछ नै, सिङ्गो परिवारलाई समेत खरानी बनाउँछ ।
किनभने जुनसुकै बैवाहिक सम्बन्ध पनि माया र विश्वासमा टि’केको हुन्छ । मायाले वैवाहिक जीवनलाई स्थित बनाउनुका साथै भावनात्मक रुपमा सुरक्षित तुल्याँछ । त्यस्तै, विश्वासले जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउनुका साथै सुयोग्य बनाउँछ ।
त्यसैले त, माया र विश्वास वैवाहिक जीवनसित अन्तरनिहित हुन्छन् । र, यी दुईको अभावमा वैवाहिक जीवन रमाइलो पनि हुँदैन । त्यसैले पनि जीवन जीउन तथा वै’वाहिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन पनि प्रत्येक दम्पतीलाई माया र विश्वासको खाँचो पर्छ । यसका बाबबुद पनि श्रीमान वा श्रीमतीबीच विश्वास भएन भने ? एक अर्काप्रति शं’का उत्पन्न भयो भने ?
भनिन्छ, खाली दिमाग शैतानका घर । दिमाग जति खाली भयो, नराम्रा विचारहरुले त्यति नै दिमागमा घर बनाउँछन् । त्यसैले आफूसित भएको उर्जालाई कुनै सकारात्मक कार्यमा प्रयोग गरौ । दिमागलाई सकारात्मक काममा लगाउने प्रयास गरौ ।
अन्यथा दिमागका कारण मनमा विभिन्न शं’का उपशंका जन्मिन सक्छ । जसले गर्दा श्रीमान श्रीमतीबीचको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्छ । त्यसैले यस्तो समस्याबाट बच्नका लागि विशेषज्ञहरुको सल्लाह आवश्यक छ ।
यहाँ अहिले सामाजिक संजालमा एउटा घट्नाले निकै चर्चा पाएको छ । एउटा परिवारमा बाबु छोरि र श्रीमती बीच यस्तो सम्बन्धको खुलासा भएको छ जुन कुरा सुन्दा मात्रै पनि अचम्म लाग्ने छ ।
यहाँ तल हेर्नुहोस यो भिडियोमा
Previous अन्तरिक्षमा ९० दिन बसेर पृथ्वी फर्किए तीन चिनियाँ यात्री
Next पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, असोज २ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल